नियन्त्रणबाहिर डेंगु, निरीह सरकारी संयन्त्र – Health Post Nepal
२०७६ भदौ २५ गते १९:३६
मुलुकका ५६ जिल्लालाई आक्रान्त बनाइसकेको डेंगुको संक्रमण फैलिनेक्रम जारी छ । सरकारी अस्पतालमा उपचारका लागि आउने बिरामीको संख्या मात्र हेर्दा पनि साउनयता ५ हजार ९५ जना डेंगुको चपेटामा आइसकेका छन् । तीमध्ये ६ जनाको मृत्यु भइसकेको अवस्था सरकारी तथ्यांक छ । डेंगुले महामारीको रूप लिँदा पनि जिम्मेवार निकाय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मूकदर्शक बनेर बसिरहेको अवस्था छ । सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीदेखि रोगनियन्त्रण महाशाखाको नेतृत्वमा रहेका कर्मचारीहरू समस्या समधानमा प्रभावकारी कदम चाल्नुको साटो हात उठाएर संक्रमितको संख्या गनेर बसेका छन् ।
करिब ४ महिनादेखि फैलिएको डेंगुको संक्रमण सरकारको काबुबाहिर गएको घोषणा गर्न मन्त्रालयलाई कुनै हिचकिचाहट छैन । डेंगु नियन्त्रणमा तीनै तहका सरकारका सबैखाले प्रयास प्रभावहीन बनेपछि सरकार लाचार देखिएको हो । सरकारहरूबीच तालमेल नहुनाले समस्या जटिल बन्दै गएको सरकारी अधिकारीहरू नै बताउँदै आएका छन् । डेंगु नियन्त्रणको एक मात्र अस्त्रका रूपमा रहेको ‘खोज तथा नष्ट अभियान’लाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न र समाजका सबै वर्गमा सचेतना पुर्याउन सरकार विफलसिद्ध भएको छ । परिणामस्वरूप मन्त्रीदेखि सर्वसाधारणसम्म डेंगुको त्रासमा दिन बिताउन बाध्य छन् ।
विभिन्न अनुसन्धानले डेंगु समुद्री सतहदेखि २ हजार १ सय मिटरसम्मको स्थानमा फैलिन सक्ने देखाएको छ । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने अझै पनि पहाडी जिल्लाहरूमा डेंगुको संक्रमण बढ्दै जाने निश्चित छ । हालसम्म इपिडिमियोलोजी तथा रोगनियन्त्रण महाशाखाले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार सिन्धुपाल्चोकमा १, सुनसरीमा १, चितवनमा १, काठमाडौंमा २ र डोटीमा १ गरी ६ जनाले डेंगुका कारण ज्यान गुमाइसकेका छन् ।
टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पतालका सरुवारोग विशेषज्ञ डा. अनुप बास्तोला डेंगु रोग नियन्त्रणका लागि ‘खोज र नष्ट अभियान’लाई महाअभियानका रूपमा चलाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘हामी स्वास्थकर्मी तथा अन्य जिम्मेवार व्यक्तित्वहरू डेंगु संक्रमितको संख्या गनेर बस्यौँ,’ डा. बास्तोला भन्छन्, ‘डेंगु नियन्त्रणका लागि व्यवहार परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ, अर्को कुनै विकल्प छैन ।’
सरुवारोग अस्पतालमा परीक्षण गराउनेको भिड, २४ दिनमा २ हजारभन्दा बढीमा भटियो संक्रमण
टेकु अस्पतालमा डेंगु परीक्षण गराउनेको भिड दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । १ भदौदेखि बुधबारसम्मको तथ्यांकलाई हेर्दा ३ हजार ६ सय ५४ जनामा परीक्षण गरिएकोमा २ हजारभन्दा बढीमा डेंगु पोजेटिभ देखिएको अस्पतालका सूचना अधिकारी रूपनारायण खतिवडा बताउँछन् ।
अस्पतालको पछिल्ला चार दिनको तथ्यांक हेर्ने हो भने डेंगुका बिरामी बढ्दै गएको पाइन्छ । २१ भदौ (शनिबार) ३ सय ९६ जनामा परीक्षण गरिएकोमा १ सय ४४ जनामा डेंगु प्रमाणित भएको थियो । त्यस्तै, आइतबार ३ सय ६३ परीक्षण गरिएकोमा १ सय ९४ मा संक्रमण पाइएको थियो । सोमबार ४ सय ४६ मा परीक्षण गरिएकोमा ३ सय ११ मा डेंगु प्रमाणित भएको थियो । त्यसैगरी मंगलबार ५ सय ४६ जनामा परीक्षण गरिएकोमा २ सय २५ मा डेंगु संक्रमण पाइएको थियो । बुधबारको रिपोर्ट भने आउन बाँकी नै रहेको अस्पतालले जनाएको छ ।
साउनयता डेंगु संक्रमणको प्रदेशगत विवरण
प्रदेश १ : ८३१
प्रदेश २ : ३९
प्रदेश ३ : ३१२६
गण्डकी प्रदेश : ९७२
प्रदेश ५ : ९७
कर्णाली प्रदेश : ३
सुदूरपश्चिम प्रदेश : २७
मृत्यु संख्या : ६
सुरुवातमा प्रदेश १ मा फैलिएको डेंगु पछिल्ला २ सातादेखि प्रदेश ३ मा महामारीको रूपमा अस्वाभाविक रूपमा फैलिएको छ । राजधानीसहित प्रदेश ३ का जिल्लाहरूमा पछिल्ला दिनहरूमा प्रतिदिन संक्रमण गुणोत्तर श्रेणीमा बढिरहेको तथ्यांक छ । निजी स्वास्थ्यसंस्थामा उपचार गराउनेको तथ्यांकलाई समेत जोड्ने हो भने डेंगुले विकराल रूप लिइसकेको विशेषज्ञहरूको भनाइ छ ।
शरीरका कुनै पनि भागबाट रक्तस्राव बढी हुने, रक्तचाप कम हुने र रगतमा प्लेटलेट्स कम भयो भने खटिरा धेरै आउने लक्षणहरू देखिएमा यी असाधारण लक्षण हुन् र यो अवस्थालाई जटिल मानिन्छ । यसको निर्मूल गर्ने उपचार भने हुँदैन, लक्षणअनुसारको उपचार मात्र हुन्छ । सँगसँगै यसले अरू रोगसँग लड्न सक्ने क्षमतालाई पनि कम गरिदिन्छ, जसले गर्दा अरू रोगले यदि आक्रमण गरेमा झन्–झन् जटिल बन्दै जान्छ ।
डेंगुबाट बच्न यी उपाय अपनाउनुहोस् ।